फिटकिरीको २० फाइदा यौ’नि मा लगाउदा के हुन्छ ? - jagritikhabar.com
फिटकिरीको २० फाइदा यौ’नि मा लगाउदा के हुन्छ ?
यूरीन इंफेक्शन भयो भने पनि फिटकरीको प्रयोग गरेर धेरै फाइदा मिल्ने छ । प्रतिदिन फिटकरीको पानीमा प्राइवेट पार्टको सफाई गर्नाले इंफेक्शन को खतरावाट बच्न सकिन्छ । यसको अलावा पानीमा घुलनशील अशुद्धिको कम गर्नको लागि पनिफिटकरीको प्रयोग गर्न सकिन्छ
– तातोपानीमा फिटकिरी डुबाएर १०–१५ मिनेट त्यसै छाडेर त्यही पानीले नुहाउने । हप्तामा २–३ पटक यसो गरे शरीरको हानीकारक पदार्थ बाहिर निस्कन्छ ।– फिटकिरी पानीमा १०–१५ मिनेट खुट्टा डुबाएर राखे सुन्नेको, थकान, दुर्गन्ध र फंगल इन्फेक्सनजस्तो समस्या समाधान हुन्छ ।
– बाथटबमा मनतातो पानीमा फिटकिरी हालेर नुहाउने । शरीर दुखेको स्थानमा फिटकिरीले मालिस गर्ने । तुरुन्त राहत मिल्छ ।– मुखमा घाउ भए फिटकिरी र अलैँचीलाई पिसेर घाउ भएको ठाउँमा लगाउने ।
– हप्तामा एक पटक जैतुनको तेल र फिटकिरी मिलाएर मालिस गर्ने । यसले मरेको कोषलाई हटाउँछ ।– तनाव कम गर्न हप्तामा तीन पटक फिटकिरी पानीले नुहाउने ।– एक कप पानीमा दुई चम्चा फिटकिरी मिलाएर घामले डढेको ठाउँमा लगाउने र १० मिनेटपछि धुने । छाला चिलाउँदा पनि यो फाइदाजनक हुन्छ